२१ माघ, २०७६ – Mero UK
Day: २१ माघ, २०७६
एउटा किड्नी फेर्छु अनि बेस्सरी काम गर्छु : प्रधानमन्त्री
२१ माघ, २०७६ २१ माघ, २०७६ / अनलाइन खबर
२१ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब चाँडै मृगौला फेर्ने र तीन वर्षसम्म सक्रियतापूर्वक सरकार हाँक्ने बताएका छन् । मृगौला फेर्नु अहिलेको जमानामा कुनै ठूलो कुरो नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए । मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चुनावपछिका कुरा नगरौं । तीन वर्षपछि चुनाव हुन्छ । तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने हो । तपाईहरुलाई बताइदिऔं, » पुरा समाचार …
एउटा किड्नी फेर्छु अनि बेस्सरी काम गर्छु : प्रधानमन्त्री Read More »
२१ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार र सरकारवीचको आलोचना-प्रतिआलोचनालाई बलिङ र ब्याटिङको संज्ञा दिएका छन् । घरमा पनि कहिलेकाँही यस्तो हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने- मैले बोलेका कुराहरुले बिझाएको भए क्षमाप्रार्थी छु । सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मंगलबार साँझ सम्पादकहरुसँग भावना साटासाट गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, » पुरा …
सम्पादकसँग प्रधानमन्त्री : एक ब्याटिङमा रिसाउन भएन ! Read More »
२१ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका सन्दर्भमा सुरुदेखि प्रश्न उठाउने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हुन्, भीम रावल । एमसीसी सम्झौताबारे नेता रावलको भूमिका केही दिनदेखि फेरिएको छ । अर्थात, यहि माघ १९ गते सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेता रावलसहित तीन जनालाई ‘एमसीसी इण्डोपेसिफिक रणनीतिको अंग भए–नभएको …
एमसीसीमा भीम रावलको प्रश्न : भारतसँग जोड्ने प्रशारणलाइन उत्तरतिर किन ? Read More »
२१ माघ, काठमाडौं । एकदिवसीय मान्यता पाएपछि नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलो सिरिज खेल्दैछ । भोलि बुधबार विहान त्रिवि किकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा ओमानसँग खेल्दै नेपालले २०२३ मा हुने विश्वकपको यात्रा सुरु गर्नेछ । नेपालसँगै ओमान र अमेरिकाले एकआपसमा २(२ खेल खेल्ने सिरिजको तयारी लगभग पुरा भएको छ । आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले मंगलबार साँझ पत्रकार …
त्रिकोणात्मक सिरिज : नेपालका लागि प्रमाणित गर्ने अवसर Read More »
पूर्वडीएसपी खिउजुमाथि लाग्यो यौन दुर्व्यवहारको आरोप
२१ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार खिउजूविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ । हालै मात्र बलात्कार आरोपमा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानका एसएसपी सौरभ राणाले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला ललितपुर, महांकालकी २१ वर्षीया युवतीले खिउजुमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन् । पीडितले यसबारे …
पूर्वडीएसपी खिउजुमाथि लाग्यो यौन दुर्व्यवहारको आरोप Read More »
सरकार चुप बस्दा कुखुराको मासुमा कालोबजारी
२१ माघ, काठमाडौं । अत्याधिक चल्ला उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै नेपाल ह्याचरी संघले ६० लाख निशेचित अण्डा नष्ट गर्‍यो । ६ पुसमा ‘चिक्स होलिडे’ सकियो, त्यसको तीन दिनपछि नेपाल अण्डा उत्पादक संघ अण्डाको मूल्य बढायो । अर्को दिन राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मासुको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढेको सूचना निकाल्यो । अहिले काठमाडौंमा …
सरकार चुप बस्दा कुखुराको मासुमा कालोबजारी Read More »